Ogaden News Agency (ONA) – Hakad Kuyimid Garoonka Diyaaradaha Ee Addis Ababa, Sababta.
Hakad Kuyimid Garoonka Diyaaradaha Ee Addis Ababa, Sababta.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya ayaa sheegaya in uu habeenimadii xalay xaninmay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa, wuxuuna gabi ahaanba hakad kuyimid dulimaadkii iyo dagitaankii diyaaradaha.
Sida xogta aan kuhelayno garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ayay biyo kusoo fataheen kadib roobab kada’ay magaalada Addis Ababa iyo niwaaxigeeda, waxaana lasoo warinayaa in ay gudaha garoonka biyo buuxsameen.
Shirkada diyaarada ee Ethiopian Airlines ayaa lagu dhaleeceeyay taxadar la’aanta dhinaca garoonka iyo waliba masuuliyad darada kamuuqata shirkada, waxaana lagu eedeeyay in aysan uqalmin in ay maamusho garoonka wayn ee magaalada Addis Ababa oo ah garoon aad mashquul u ah.
Shirkada diyaaradaha ee Itoobiya oo maalinkasta xaraysa malaayiin lacag ah ayaa lasheegay in aysan kharash galinin garoomada wadanka iyo diyaaradaha Itoobiya kuwaas oo tayo ahaan aan fiicnayn, waxaana lasheegayaa in uu shirkada ladagay musuq maasuq.
Garoonka caalamiga ah ee magaaladaAddis Ababa ayaa lasheegayaa in markasta oo roob uu da’o ay biyo soogalaan isla markaana ay diyaaraduhu xanibmaan.